က ISO ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များဘာတွေလဲ? - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
သာကွန်ယက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်သောလူကြိုက်အများဆုံး disk ကိုပုံရိပ်များတစ်ခုမှာ, ခြောအဲဒီ ISO format နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ဒီ format နဲ့ထောကျပံ့သောအစီအစဉ်များကိုအများကြီးအဖြစ် disk သို့ image ကိုမီးရှို့ခြင်းသို့မဟုတ်ကဖန်တီးအပြင်တစ်ခုခုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ဟန်ဖြစ်ပါတယ် - တကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်လက်တဆုပ်စာ ...
ဤဆောင်းပါး၌ငါ (ငါ့အပုဂ္ဂလဒိဋ္အမြင်အတွက်သင်တန်း) က ISO ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုဖို့လိုပါတယ်။
စကားမစပ်အဲဒီ ISO အတုယူ (က virtual CD ကို Rom'e အတွက်အဖွင့်) အတွက်အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကဆောငျးပါးတှငျဆှေးနှေး:
ဒါကဖြစ်ကောင်းက ISO အတူလုပ်ကိုင်များအတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာပြင်ဆင်ရန်, ဤရုပ်ပုံများကိုဖွင့်လှစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်, ဖန်တီး, CD နဲ့ flash drives တွေကိုပေါ်မှာမီးရှို့။
သငျသညျကို Windows ကို install တဲ့အခါမှာဥပမာ, သငျသညျဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးက USB flash drive ကိုသို့မဟုတ် disc ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ စနစ်တကျတစ်ချောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့, သင် UltraISO tool ကို (လမ်းဖြင့်, စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက် USB flash drive ကိုလိုလျှင်, BIOS ရိုးရှင်းစွာမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး) မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
စကားမစပ်ပရိုဂရမ်ကို (သင်နေဆဲရှိသည်ဆိုပါကသင်တန်း၏,) သင်ပုံရိပ်တွေပင် hard drive တွေနှင့် Diskette မှတ်တမ်းတင်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုအရေးကြီးပါတယ်: ရုရှားဘာသာစကားများအတွက်ထောက်ခံမှုရှိသေး၏။
နောက်ထပ်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ features တွေနဲ့ functions အရေအတွက်ရိုးရှင်းစွာအံ့သြဖွယ်ပါ! အဓိကတလျှောက်အပြေး။
- CD / DVD ကို drive တွေကိုအနေဖြင့်က ISO ပုံရိပ်တွေ၏ဖန်ဆင်းခြင်း;
- Copy ကူး CD / DVD ကို / Blu-ray disc;
- ဖယ်ရှားရေးအသံ CD များ rips;
- က virtual drive ကိုအတွက်ပုံရိပ်တွေဖွင့်ရန်စွမ်းရည်,
- တစ်ဦး bootable USB flash drive ကိုဖန်တီးရန်,
- မော်ကွန်းတိုက်ဇစ်, rar, 7Z အထုပ်;
- ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် format နဲ့ DAA အတွက်က ISO ပုံရိပ်တွေချုံ့;
- ထောက်ခံမှု Windows ကိုအားလုံးအဓိကဗားရှင်း: XP, 2000, Vista, 7, 8 ။
- အခကြေးငွေ-based ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
(ဘင်, CCD, mdf, စတာတွေက ISO, ဒါပေမယ့်လည်းအများအပြားအခြားသူများနှင့်သာမဟုတ်) ပုံရိပ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ဘို့တစ်ဦးကအကြီးအပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူကဘာလဲဒီအစီအစဉ်တွင်စိတျစှဲ - (ဘယ်မှာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်နှိပ်ဖို့ချက်ချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်း) ကိုအစပြုသူအာရုံစိုက်၎င်း၏ရိုးရှင်းများနှင့်ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
- disk ကို, ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲဖို့က ISO ပုံရိပ်တွေ၏ဖန်တီးမှု;
- အခြား (ထိုကဲ့သို့သောသည်အခြား utilities အကြားအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ) ကိုတဦးတည်းဖိုင်ပုံစံကနေပုံရိပ်တွေကို convert;
- အတုယူပုံရိပ်တွေ (တစ်ဦးကိုမှန်ကန် disk ကိုဖြစ်လျှင်အဖြစ်ပုံတစ်ပုံကိုဖွင့်လှစ်);
- ကိုမှန်ကန် discs တွေကိုအပေါ်စံချိန်ပုံရိပ်တွေ;
- Window 7, 8 အဘို့ပံ့ပိုးမှု;
- အခကြေးငွေ-based program ကို;
- UltraISO မှလေးစားမှုနှင့်အတူလျော့နည်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို (သို့သော်, ခဲ-အသုံးပြုသော features နဲ့အများဆုံးလိုအပ်သောမဟုတ်) ။
ဒီလိုမျိုး၏ရှေးအကျဆုံး tools တွေကိုတစ်ခုမှာ။ ဒါဟာတစ်ချိန်ကအလွန်လူကြိုက်များခဲ့သည်, ထိုအခါမူကားဘုန်းအသရေက၎င်း၏ရရှိထားသောဂုဏျလြှော့ ...
စကားမစပ် developer များကနေဆဲကအားလုံးကိုလူကြိုက်များ operating system မြားကို Windows အပေါ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, ထောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်: XP, 7, 8 ရုရှားဘာသာစကားထောက်ခံမှု * (အချို့နေရာများမှာမေးခှနျးတအမှတ်အသားများ, ဒါပေမယ့်ဝေဖန်မဟုတ်ရှိပါသည်သော်လည်း) လည်းရှိပါသည်။
- သင်က ISO ပုံရိပ်တွေဖန်တီး disc ကိုမှသူတို့ကိုရှို့နိုင်ပါတယ်;
- ကို virtual CD-ROM တွေကိုအထောက်အပံ့သည်ရှိ၏,
- သင်က image ကိုချုံ့နိုင်ပါတယ်;
- floppy disks ကို၏ရုပ်ပုံများကိုဖန်တီး (ဖြစ်ကောင်းမရှိတော့သက်ဆိုင်ရာပေမယ့်အလုပ် / လေ့လာမှုအဟောင်း PC ကိုအစာစားလျှင် - ကအသုံးဝင်သည်) အား;
- စသည်တို့ကို, bootable CD ပြားဖန်တီး
- အစီအစဉ်ကိုဒီဇိုင်း "ပျင်းစရာကောင်း" ခေတ်သစ်စံချိန်စံညွှန်းများကြည့်ရှု;
ယေဘုယျအားဖြင့်ကဲ့သို့သောအားလုံးအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြပေမယ့်အစီအစဉ်၏နာမ၌နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကို Magic ထံမှ - သင်ပိုမိုတစ်ခုခုချင်တယ် ...
သည်လူအပေါင်းတို့ကိုအားလုံးအောင်မြင်သောအလုပ်လုပ် / လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု / အားလပ်ရက်ရက်သတ္တပတ်ရဲ့ ...
ဗီဒီယို Watch: SONY A6300 ISO1600 4K Video Test KOWA Industriallens LM-50IR-F (အောက်တိုဘာလ 2019).